Izinqaba Benkathi Ephakathi France: izithombe, izindaba, izinganekwane
France ihlukaniswe eMfuleni Loire ezingxenyeni eningizimu nasenyakatho. Ngamunye wabo sezulu layo siqu. Le ndawo eyingqayizivele idume ubuhle nemizana yalo zisho okuthile okubalulekile zomlando, indawo wokwelusa, iwayini elimnandi, izikhumbuzo abadumile nezigodlo.
Esigodini singaqiniseka izigodi mayelana 300. Ungabona izinqaba eziningi France ebalazweni elingezansi. Phakathi kwabo kukhona inqaba sangempela izakhiwo wezokuVikela izinqaba. Ukuze ukwakhiwa usebenza lapha abehora okungcono landscape abaklami bamapulani kahle leyo minyaka.
Okwamanje samanje, izigodlo eziningi nezigodlo waseFrance lingaqhubeka ezizimele, abanye zivulelwe ukuvakashelwa emphakathini, kodwa kukhona nalabo lapho amahhotela abasebenza manje.
Amahhotela du Plessis-Bourré
Lokhu castle emangalisa Itholakala zindlani ka Ekyuie, ogwini the Loire, eduze Angers. Plessis-Bourré ngokuphelele walondoloza, ngakho izivakashi eziningi abangakwazi ukukubona ngendlela efanayo lapho lakhiwa iminyaka 500 edlule. Ukhiye luyinhlanganisela okunethezeka Renaissance kanye izitayela ephakathi.
Lapho nje umklamo walo wanikwa umsebenzi wokwakha encane, ne inqaba langempela nge kwetimphawu letidzingekako ngoba. Ngaphezu kwalokho, Plessis-Bourré kufanele sithokomale futhi elula ukuhlala lapho kungenzeka ukusingatha eziningi izivakashi ukumema futhi enze nemidanso ehlukahlukene. Umakhi angase zonke lezi zimfuneko asebenze. Castle kuyinto ukuma unxande ensimini ka amamitha 59 kuya 68. Njengezinye izinqaba yangenkathi ephakathi yokuphila kuka-France, amakhona umbhoshongo usuphothuliwe. Emhlabeni wonke isakhiwo amba emhosheni, lapho ungahambisa kuphela kwi Ibhuloho eliphakanyiswayo elingena encane - indlu bridgehead Yakhiwa ukuze awuvikele. Isikhala wasala eliphakathi kodonga futhi nomsele kumnikazi castle kwaba yindawo lapho asikwazanga ukuhamba.
Uma udabula Loire Valley awukwazi miss enqabeni Chenonceau (France), elakhiwa ngo-1515-1521 GG. e isitayela ekuseni Renaissance futhi ngasekupheleni Gothic futhi sizungezwe izingadi esiyingqayizivele.
Lokhu Chateau ngezikhathi ezahlukahlukene okungewakho Ekaterina Medichi futhi uFrancis I. Zonke abanikazi enqabeni lavuselelwa kaningana, waze wangena ifa Magnier umndeni (1914), wahlanganyela ukukhiqizwa ushokoledi yena. Ukwakhiwa kabusha ingaphakathi yaqedwa kuphela ngo-1951 ingaphakathi amahholo kanye namakamelo ngenxa yalokhu uye washintsha neze. Kuze kube manje, lo Chenonceau Castle iyona avakashelwa ezweni izindlu. Hhayi ukuze ibenze Ayihlale ukwazi kangcono eze lapha ekuseni. Kungenzeka ukuqasha umhlahlandlela ophathekayo alalelwayo - it uzokutshela yonke indaba zalezi zindawo.
Umkhawulo yesifundazwe Brittany futhi laseNormandy, e-esizalweni somfula. Kyusnon iyisiqhingi esincane enamadwala. Ngokusho yetinsita Uyingelosi Enkulu UMikayeli ngonyaka 708 beza umbhishobhi Avranches St Aubert, yathi kuye kule ndawo ukwakha isonto. Ibandla wanquma usethe ngesimo enqabeni. Entabeni izinsalela Izindlwana ezimbili eziye zatholakala ukuthi zihlobene nesikhathi.
Okwamanje samanje enqabeni Mont Saint-Michel - ingenye ezikhangayo edume kunazo yezwe. Ukuze uthole yokungena kangcono abbey zezivakashi edamini lakhiwa lapha - I-izimoto zakhe zinyakaza. Nokho, ngenxa ukwakhiwa nezinkinga imvelo, ngakho-ke uyahamba ukuthi lowo muntu adilize futhi ukwakha ibhuloho esikhundleni edamini.
Lona yokuhlala omangalisayo zamakhosi, okuyinto isendaweni Loire. Le lokhi kungaba sikala ukuba zincintisane Versailles. Ekuqaleni Chambord castle uJesu wazalwa njalo ukuzingela Lodge, okubonisa kwezinye indlela amandla mithi lapha. Cishe, yingakho uFrancis I, waba wahlanganyela esakhiweni into, isakhiwo sayo engawayekanga imali.
The Castle - ngesibonelo esiphawulekayo i zamagama ngendlela emangalisayo sesakhiwo Italian Renaissance namafomu ephakathi. Kuyinto ezitebhisini esiyingqayizivele, iphrojekthi lapho wenziwa akhiwa uLeonardo da Vinci yena. Izivakashi ukuvakashela leli castle libuye Kunconywa ukuhamba futhi park yayo - kuba inqolobane imvelo ihlanganisa indawo ka 5540 amahektha. Phela, landscape enjalo ubungeke ube ikuphi ukubona.
Castle uLe Lude
Ukuqhubeka ukuhlola izinqaba of the Loire (France), isithombe zazo okwethulwa kulesi sihloko, kufanele siphawule Le Lude. Yakhiwa X-XI eminyaka isakhiwo ukuzivikela. Le nqaba yakhelwa ukuvikela ekuhlaseleni kwe-Normans nombuso IsiZulu Angevin. Kodwa enqabeni lase lithengwe ukuhlambalaza kwesitha sayo, futhi kuphela wabuya ekhulwini xv ngu umqhele France. Marshal Gilles de Rais, Liye lashaya isitha lapho, wathola le nqaba njengoba umvuzo.
Lokhu nqaba ukuxubana ezithakazelisayo avumelanayo izitayela ezahlukene. ukwehluka kubonakala umhlobiso, ifenisha kanye Interiors yabo. Okwamanje uyivule kwezivakashi.
Krussol inqaba Yakhiwa ngekhulu XII ukuvikela esigodini emfuleni. Rhone. Lokhu kuqiniswa elapha imingcele France niqaphe ukuhlaselwa Italy. Ekuqaleni ukwakhiwa ala mazwe kwakungekaNkulunkulu Gerald Bast, Nkosi.
I inqaba yayakhiwe inani eliphakeme limestone futhi ukubuka kakhulu futhi uvikelwe. Kuyinto Iphuzu eliyinhloko endaweni ezungezile. Yemvelo emthambekeni emaweni waqhubeka eqinisa udonga. Le nqaba kwakucishe ungenakunqotshwa.
Isakhiwo eyinhloko-ha 3. Eyokuqala kushaft izinqaba lapha Ayibalwa. It yadalwa ukuvikela emzaneni omncane eduze enqabeni. Yena kwakufanele amakhaya akukho ngaphezu kuka-100.
Krussol inqaba ekhulwini XVI, lapho saqala empini internecine, ekugcineni kwahlaluka ukuthi enhliziyweni empini. noMbusi wababusi Local izinduna ngaphansi kwebhaxa inkolo, bazama ukuyibamba izindawo ezinkulu. Fortress empini labhujiswa, futhi ngomzuzu wamanje sekonakele.
Uma ucabangela izinqaba of the Loire, awukwazi indiva lesi. On ogwini olunamadwala emfuleni, phakathi imizi Blois and Tours, lokhu Igugu elifihlekile real esigodlweni izakhiwo.
Umlando waleli castle enhle kuhlobene ngokuqondile amagama Diane de yasePoitiers, Ekateriny Medichi, zikaNostradamus, nezikhulu ahlukahlukene, ayivusa ayesephendulwe yokuhlala elicwengiwe. Kuze kube manje, le nqaba labetibambile edumile ngamazwe engadini umkhosi. Minyaka yonke, inqaba ensimini ka abaculi bendawo, landscape abaklami, balimi wadala engengaphansi kwengu-30 izingadi.
Engxenyeni zomlando wezwe, eMnyangweni Maine-et-Loire, kukuthukuthelise castle itholakala. It lethiwa edolobheni eponymous. Phakathi lasungulwa, enqabeni ngokuphindiwe yaba imbangela umzabalazo kwezombangazwe eFrance nase-England. Izindonga zawo omkhulu waqala beyokwakha amakoloni omkhulu, wamelana eziningi lokuvimbezela imisebenzi. Lokhu castle wayengomunye lezinto main wezwe zamasu.
Waqala ukuba zakhelwe emuva ekhulwini lesishiyagalolunye yokulwisana ukuhlaselwa zamaRoma. Ekhulwini nantathu, ke Kwahlelwa eyinkimbinkimbi izinqaba. Khona-ke kukhona ukuqiniswa kanye ukunwetshwa izinqaba zayo.
Castle isikhashana kwaba yokuhlala Rene Anzhuyskogo, ukuhlela khona jousting tournaments kanye nemikhosi etemibhalo. Ngenxa izimpi njalo ngekhulu leshumi nesithupha, nqaba yawela kwamazinyo, noHenry III ngaphambilini ukulichitha. Kodwa inqaba wawunamandla kangangokuba uhlela ukwenza emsebenzini, futhi umsebenzi igcwaliswe. Ngokushesha kukhona isithembiso esingathí sina Françoise of Lorraine uKhesari Vendôme.
Imicabango izivakashi namanje kuyabamangaza zakhe isithombe esikhulu "Apocalypse". Kuyinto umkhiqizo amamitha ambalwa eside.
Castle of Clos-Luce
Eqhubeka ukufunda izinqaba isiFulentshi, isithombe ongawabona kulesi sihloko ukunikeza futhi Clos-Luce. Lesi sakhiwo zamatshe pink amhlophe kwaba Kwakhelwe esisekelweni, esiphathelene ososayensi kwesikhathi Halo namaRoma. Umnikazi enqabeni kwaba ozithandayo bobukhosi Eten Le Loup, owayengufakazi umpheki umsizi at Plessis-les-Tours.
Medieval umbhoshongo square liye lasinda kuze kube namuhla. Wayengumngane yesimiso jikelele izinqaba. Castle inqaba zezinkulumo abangu sashintsha by yezinhlobo Renaissance izakhiwo - isakhiwo sabo atholwe emva ukuthengwa Charles VIII enqabeni.
Ingabe wayesekulungele ukuba yokuhlala, inkosi, ekhishwe ezitsheni enkulu etsheni, wakha indlu ngoba Anny Bretanskoy. Ngokuhamba kwesikhathi sakhe bekukhona uFrancis I, uLeonardo da Vinci, uMargarita Navarskaya, kwakukhona Baba de la Burdezer (ukhukhuva King).
Castle ngesikhathi Revolution sasingawohloki ngenxa imizamo Amboise d'umndeni. Ngaphezu kwalokho, kwaba impahla yomndeni Saint-Bris - yimpahla yakhe, manje. Abameleli beNdikimba House ozama lokuphinda zangaphandle umbono ka enqabeni futhi Interiors bayo basendulo.
Ngekhulu leshumi nesithupha, kwakukhona abadumile uLeonardo da Vinci. Okwamanje samanje wahlanganyela abakhi sokubuyiselwa, amakhosi netshe, nokhuni, ubuciko restorers. Okokuqala avuselelwe nonogada Hall (kwaba ekhishini nge Leonardo), uzoqhubeka abe olusha engaphansi iphansi, okuzokwenziwa adalwe wayeyisazi imoto umdwebi sika, kanye Omkhulu Council Hall. Ngaphezu kwalokho, sizokwazi ukubona egumbini uLeonardo da Vinci Margarity Navarrskoy.
Uma ucabangela izinqaba eningizimu yeFrance, kuyafaneleka ukuthi, okuyinto olubaluleke phezu Loire. Waqala indaba yakhe kusukela ngekhulu leshumi nanye. Ngakho-ke, wabhekana nezikhathi eziningi ezahlukene - kwaba esigodlweni; amaqhawe medieval inqaba, inkinobho ifektri ejele ... Le nqaba evakashela abaphika eziningi, ama-philosophers, abadwebi kanye Okugweda esuka kulo lonke elaseYurophu. izivakashi ngasinye kuyoba mnandi ukuba sizungeze kwemibhoshongo abagibele amahhashi kanye amafulethi wasebukhosini, ukuze simbone neqoqo ekhexisayo ifenisha, ejabulela enhle engadini-panoramic Loire ogwini.
Abaningi abadumile phezu noveli ngu Alexandre Dumas castle itholakala eningizimu yeFrance. Yakhiwa ukuze ivikele lo muzi ekuhlaselweni ulwandle. Inkosi yakhe wamyala ukwakha uFrancis I, nakuba le nqaba ayizange ehlaselwa, lapho kukuwe namuhla angase igcinwe ubuqotho ngokuphelele.
Modern Marcel ngokufanelekile uyaziqhenya ke - ingenye ezikhangayo zako ezisemqoka. Ngakho, ngokuvumelana Chateau d'Uma kukhona izinkambo waqondisa, kukhona ikhefi ethokomele, bathengisa ngifaka futhi eziyisikhumbuzo.
Kwaphela isikhathi eside le nqaba yayisetshenziswa njengesikhungo ejele, njengoba kwakunjalo Iyiphi indawo engcono kakhulu izixhumanisi - khona Ukuphunyuka kwakungenakwenzeka ngenxa imisinga enamandla ngasogwini lwalesi siqhingi. Le nqaba kuyinto egumbini elingenamafasitela, etholakala ngemuva isakhiwo, kodwa abantu imali nezinye izimo - base phezulu isakhiwo owawunesihloko lokujabulela ukubukwa ulwandle lapho akhona ngiphefumula umoya fresh.
Kuphela ngasekupheleni kwawo-nesishiyagalolunye ejele ekhulwini akabange esaba khona, futhi enqabeni baba Luhambo wezwe.
Serrão inqaba eyakhelwe ngekhulu leshumi nesithupha, kodwa, like izinqaba eziningi isiFulentshi, isakhiwo mlando kakhulu kabusha emakhulwini eminyaka kamuva. Ukuphatha ekuqaleni kwakungekaNkulunkulu ozala Le Bris - babuza imvume ukwakhiwa yayo Louis XI. Washeshe wahileleka ukuklama edumile Philibert Delorme.
Ngemva ushintsho lapha namanje umoya Yenguquko, okuyinto sici for the inkathi uFrancis I (yayakhiwe cishe zonke izinqaba of the Loire). Izakhi omdala Ilokhi ezibhekwa esemagumbini futhi ube nemigodi ngemigodi, okuyinto lenhlanganisela ngokuvumelanayo ne domes Okuthwesa umqhele umbhoshongo, futhi namafasitela amakhulu. Phezulu umbhoshongo ehlotshisiwe balustrades.
Olungaphambili lwesonto isakhiwo ehlotshisiwe esingunxantathu gable ukudala enhle Ngokuphambene sandstone mhlophe futhi Shale konsundu.
Le nqaba zingalondolozwa Interiors ngelabhulali omangalisayo futhi tapestries.
Kuyinto wobuciko esiyingqayizivele bokwakha ukuzivikela futhi yezempi, futhi lokho Kugcizelela ne ubuhle baso namandla. Carcassonne Castle (France) siqukethe emithathu ikhilomitha onemizila emibili izindonga ezinamandla nge imibhoshongo, ogama ifomu kwenza bonke ziyathuthumela.
Isici esiphawulekayo castle wukuthi kule ndawo kukhona ukuphila okuvamile ngokuphelele - ukushayela izimoto abendawo baphile. Lapho kungaba sengathi isakhamuzi egcwele edolobheni medieval - emnyango inqaba evulekile ngokuphelele futhi free!
Caphuna de Carcassonne itholakala eningizimu-mpumalanga ibhange kwesokudla lomfula. Aude. Babalelwa ku-ke kukhona umugqa kabili izindonga nge obuphelele ingqikithi 3 amakhilomitha, okuyinto ethwele 52 nemibhoshongo. Le nqaba eYurophu ngesikhathi ayebhekwa ungenakunqotshwa kakhulu. On insimu yalo kukhona Basilica kanye ukubala sika castle Comtal. Fortress 1997 likhona UNESCO uhlu.
Yiqiniso, akubona bonke izinqaba of France elihlobene ne igama ezidumile uLeonardo da Vinci, kodwa hhayi lena. Leonardo ngokumenywa Francis the Okokuqala, wavakashela Territory futhi wahlala lapha wokugcina 3 iminyaka yokuphila. Lesi sikhathi wanikezela umsebenzi ku-imidwebo yakhe nokwasungulwa. uhambo ngalunye lapha kuyoba mnandi futhi ezithakazelisayo. Kuleli qophelo, 'sebephila' imidwebo ezisunguliwe amakhosi lapha, isivakashi ngasinye bazokwazi ukuvula yena ungungqondongqondo yaleli zwe kweqiniso.
Castle of Gye-Péan
Ukutadisha izinqaba eziningi yeFrance, kuba kokukhuluma kuwufanele isakhiwo medieval eyakhelwe eduze Ponlevua ekhulwini XIV-XV. Kuyinto isikwele uhlelo nenhle ukuzingela inkundla. Izindonga zomuzi bangene bese kwemibhoshongo igcwaliswe ithala. Zonke izindlu yakhe yokuhlala wahlela ukuma uhlamvu "P" ukwakha ngaphakathi egcekeni elikhulu. Lesi sakhiwo esikhulu ukuhlobisa kwemibhoshongo round, futhi phambi zikhona amawindi amaningi nenhle, ngenxa okuyinto Emakamelweni angaphakathi amakhosi uhlale omningi ukukhanya.
Lapha, lapho babemenywe ezifana uHenry II, uFrancis I, Lafayette, Balzac. emakamelweni Inner abangu ahlotshiswe isitayela inkathi Renaissance.
Okwamanje samanje umnikazi - Marquis de Kegelen. Le nqaba ivuliwe ezovakasha, amakamelo yakhe edume kunazo zonke ezibhekwa salon, Guards Hall, umtapo futhi yesonto. Emisebenzini ingaphakathi eminingi yobuciko yasetshenziswa, kule ndawo kukhona impahla yasendlini uLouis XV futhi XVI, ezindongeni presents tapestries ekhexisayo. Ukuhlobisa ngendwangu castle ngesineke ngabaculi ezidumile kuhlanganise Rigaud, Jean Louis uDavide, Fragonard, Guido Reni, Andrea del Sarto.
Versailles ingenye izinqaba edume kunazo yezwe, ngonyaka edonsela 3 million izivakashi. Lokhu Isigodlo esihle lakhiwa ngo-1624 i-uLouis XIII njengoba lodge ukuzingela. Kamuva lo mlisa landiswa futhi waba yokuhlala yawo wonke umkhaya wasebukhosini. Izici unique zihlanganisa indlela enqamulelayo esigodlweni nge 17 nemengamo sesibuko, Ehholo Mirrors kanye amaningi neminye imininingwane ezithakazelisayo. Izivakashi ekamelweni YeNdlovukazi ungabona umnyango ezifihliwe - UMariya Antuanetta emva wenza ophunyukayo. Versailles nge namakamelo awo emangalisa uyisidingo ukuvakashela. Akufanele sibakhohlwe mayelana izingadi 250-acre lomhlaba esigodlweni, okubonisa weJiyomethri enhle emizileni, izimbali nezihlahla.
Ukuze zonke izivakashi, abavakashi kanye amaholide lapha kuzovula kwenkundla zinkulu, charm isiFulentshi, izinqaba ngokubabazekayo France ... Namuhla, wonke izikhumbuzo zomlando isiko yezwe KweNkathi Ephakathi alondolozwe ngokucophelela, futhi abaningi ababeke ubukade esimweni agugile, manje ekuqaleni ukubuyisela.
Lake Kalkan, Bashkiria: incazelo, izivakashi kanye namaqiniso ezithakazelisayo
Inhloko-dolobha ye-Wales - Cardiff
Qeqesha Lviv-Odessa - kusukela enhlokodolobha esentshonalanga eningizimu Palmyra
. M. Yu Lermontov "Fugitive": wokuqukethwe inkondlo emfushane
U-Andrey Gavrilov: ifilimu ephelele
Mudguard jikelele - lokho izici?
Mare sidilizwa Kuyini lokhu?